CBD तथ्या 20्क २०21 - समाचार | अगस्ट 2021
समुदाय कम्पनी, चेकआउट कम्पनी, स्वास्थ्य शिक्षा कल्याण प्रेस कम्पनी कम्पनी, औषधि जानकारी स्वास्थ्य शिक्षा, कल्याण औषधि जानकारी, स्वास्थ्य शिक्षा समाचार, कल्याण चेकआउट स्वास्थ्य शिक्षा औषधि जानकारी समुदाय, कल्याण घरपालुवा जनावर
मुख्य >> समाचार >> CBD तथ्या 20्क २०21
CBD तथ्या 20्क २०21
CBD के हो? | सीबीडी कत्तिको सामान्य छ? | अमेरिकामा सीबीडी तथ्या .्क | उमेर अनुसार सीबीडी आँकड़े | CBD उत्पादन प्रवृत्ति | CBD र समग्र स्वास्थ्य | CBD को लागत | कानून र प्रतिबन्धहरू | प्रायः सोधिने प्रश्नहरू | अनुसन्धान
त्यहाँ यसको वरिपरि केही छैन: CBD आधिकारिक रूपमा छ जताततै । यसको लोकप्रियता आसमान छ। एक आला वैकल्पिक स्वास्थ्य उपचार को रूपमा शुरू के एक राष्ट्रव्यापी क्रेज बन्यो। र यो अब तेल र tinctures को रूपमा देखा पर्दैन। त्यहाँ जिज्ञासु सीबीडी उत्पादनहरूका सम्पूर्ण एर्रेहरू छन् जसमा ल्याटेस, मेकअप, बेडशिटहरू, नुहाउने बम र कुकुरको व्यवहार पनि समावेश छ।
तर के CBD एक अचम्मको औषधि हो, वा अर्को स्वास्थ्य लहर? त्यहाँ विचारहरूको कुनै कमी छैन, तर हामी सीबीडी तथ्या from्कबाट धेरै बुझ्न सक्छौं। हामीले भरपर्दो अनुसन्धान कम्पाइल गरेका छौं र एक CBD सर्वेक्षण CBD प्रयोगको व्यापकता र यसको सम्भावित स्वास्थ्य लाभहरू परिप्रेक्ष्यमा राख्न।
CBD के हो?
जब केहि मानिसहरूले सीबीडी सुन्छन्, तिनीहरूको दिमाग तुरुन्तै मारिजुआनामा जान्छ। र जहाँ एक जडान छ, यो एक सोच्न सक्छ को रूप मा नजिक छैन। मनोरञ्जन र चिकित्सा भांग धेरै राज्यहरूमा अब उपलब्ध छ, यो फरक नोट गर्न महत्त्वपूर्ण छ। सीबीडी मुख्यतया हेम्प डेरिभेटिभ हो, जो गाँजा खाने काचेजस्तै हो, तर उही बोट होइन।
हामी एक कदम पछि फर्कौं। भांग र गाँजा दुबै भांग जीनसमा पर्दछन्। क्यानाबिस बोटमा दुईवटा स्वाभाविक रूपमा हुने यौगिकहरू हुन्छन्: क्यानाबिडिओल (सीबीडी) र टेट्राहाइड्रोकानाबिनोल (THC)। CBD र THC दुबै cannabinoids हुन् तर शरीरमा फरक प्रभावहरू छन्। सब भन्दा मुख्य कुरा, THC का मनोवैज्ञानिक प्रभावहरू छन् र CBD गर्दैन, त्यसैले CBD ले तपाईंलाई उच्च महसुस गराउँदैन।
मारिजुआना र हेम्प प्रत्येक दुबै कम्पाउन्ड तर फरक अनुपात मा हुन्छन्। हेम्पसँग THC को धेरै तल्लो स्तर र CBD को ठूलो मात्रा छ, त्यसैले यो प्राय जसो CBD उत्पादनहरूको लागि प्रयोग गरिन्छ। अर्कोतर्फ, मारिजुआनासँग अझ बढी THC ​​छ।
CBD प्रयोग गर्दछ
मानिसहरूले लगभग सबै कुराको लागि CBD प्रयोग गर्छन्। एक चिकित्सा अवस्थाको नाम दिनुहोस् र त्यहाँ त्यहाँ कोही छन् जसलाई CBD वा अन्य भांग उत्पादनहरूसँग यसको उपचार गरिरहेका छन्। तर जब कसैले दाबी गर्छन् कि CBD ले उनीहरूको माइग्रेन वा छाला दाग निको पार्छ, यसलाई नुनको दानाले लैजानुहोस्। किनभने CBD उद्योग एकदम नयाँ छ, यसको प्रभावहरू पूर्ण रूपमा बुझ्नका लागि पर्याप्त अनुसन्धान भएको छैन।
यद्यपि यसले विभिन्न सर्तहरूको उपचारमा प्रशस्त प्रतिबद्धता देखाउँदछ, तर प्रत्येक व्यक्तिको लागि ती सर्तहरूको लक्षणहरू वा लक्षणहरूको उपचार गर्न यो एक साइज फिट हुने सबै [उपचार] होइन, एमडी मनीषा सिंगल भन्छिन् स्वागत ईथर । सामयिक सूत्रहरू साथ साथै इन्जेस्टेबल फारामहरूमा सीबीडीका फाइदाहरू र कार्यहरूको अनुसन्धान जारी छ। त्यो प्रयोग यसको प्रारम्भिक चरणमा छ र त्यहाँ लामो यात्रा गर्नु पर्ने हुन्छ। CBD र अन्य क्यानाबिनोइडहरूको लागि चिकित्सा सम्भाव्य निर्विवाद छ, तर चिकित्सा अनुसन्धानले समय र सावधानीपूर्वक विश्लेषण लिन्छ।
त्यो भनियो, यसले उपचारमा प्रभावकारिता देखायो पुरानो पीडा र चिन्ता (यसको दुई सामान्य प्रयोगहरू) साथै अनिद्रा र गठिया। र एक मात्र एफडीए-अनुमोदित औषधि जुन अहिलेसम्म क्यानाबिडिओल समावेश गर्दछ Epidiolex , जसले दुई वर्ष उमेर र अधिक उमेरका बिरामीहरूमा ड्राभेट सिन्ड्रोम वा लेन्नोक्स-ग्यास्टौट सिन्ड्रोमसँग सम्बन्धित बाल्यकालको दौडहरूको उपचार गर्दछ।
सीबीडी कत्तिको सामान्य छ?
Adults 33% अमेरिकी वयस्कले एक वा बढी CBD प्रयोग गरेका छन्। (एकलकेयर, २०२०)
Americans 64% अमेरिकीहरू CBD र / वा CBD उत्पादनहरूसँग परिचित छन्। (ग्यालअप, २०१))
अनुमानित million 64 मिलियन अमेरिकीहरूले गत २ 24 महिनामा CBD प्रयोग गरेका छन्। (उपभोक्ता रिपोर्टहरू, २०१))
CBD प्रयोग गर्नेहरू मध्ये, २२% ले उनीहरूलाई पूरक वा प्रिस्क्रिप्शन वा ओभर-द-काउन्टर ड्रग्स प्रतिस्थापन गर्न सहयोग गरे। (उपभोक्ता रिपोर्टहरू, २०१))
अमेरिकामा सीबीडी तथ्या .्क
हेम्प-व्युत्पन्न सीबीडी उत्पादनहरू सबै states० राज्यहरूमा वैध हुन्छन्, जबसम्म उनीहरूसँग ०.।% THC भन्दा बढी हुँदैन। (खाद्य र औषधि प्रशासन, २०२०)
समग्र भांग बिक्रीमा, कोलोराडो २०१ to पछि १ बिलियन डलर भन्दा धेरै बेचेको सूचीमा शीर्ष स्थानमा छ। (CNN, 2019)
२०१ in मा सीबीडी बिक्रीका लागि शीर्ष राज्यहरू क्यालिफोर्निया ($ 3030० मिलियन), फ्लोरिडा ($ २ करोड million० लाख), र न्यू योर्क (5 २१5 मिलियन) हुन्। (स्टिस्टा, २०१))
सीबीडी प्रयोग गर्ने अमेरिकीहरू मध्ये धेरै जसो प्रयोगहरू दु: ख राहत (% 64%), चिन्ता (%%%), र अनिद्रा (%२%) को लागि हुन्छ। (एकलकेयर, २०२०)
सीबीडी वेब खोजीहरू २०१ 2016 देखि २०१ 2017 सम्मको १२ 125..9% र २०१ 2017 देखि २०१ 2018 सम्म १ 160०..4% ले वृद्धि भयो। ( जामा नेटवर्क , २०१))
संयुक्त राज्य हेम्प फार्मल्याण्ड २०१ 2017 मा २,,7१13 एकरबाट बढेर २०१ 2018 मा, 78,१66 एकडमा पुगेको छ। (फूड बिजनस न्यूज, २०१ 2019)
उमेर अनुसार सीबीडी तथ्या .्क
CBD प्रयोगकर्ता जनसांख्यिकी skew जवान। सबै उमेर समूहहरूमा, अमेरिकी १ 18-२9 उमेरले सम्भवतः सीबीडी लगातार प्रयोग गर्ने गर्दछ, र यसको लोकप्रियता उमेरसँगै घट्छ। (ग्यालअप, २०१)):
१ %-२9 वर्षका २०% व्यक्तिले सीबीडी प्रयोग गर्दछ
-4०--4 ages उमेरका १%% व्यक्तिहरूले CBD प्रयोग गर्छन्
%०-6464 वर्ष उमेरका ११% व्यक्तिले CBD प्रयोग गर्छन्
% 65 बर्ष उमेरका of% व्यक्तिले CBD प्रयोग गर्छन्
र वयस्कहरूको लागि नम्बरहरू लगभग दोब्बर जसले यो एक वा बढी प्रयास गरेका छन्। एक 2019 उपभोक्ता रिपोर्ट CBD सर्वेक्षण अनुसार:
१ 18-२9 वर्ष उमेरका %०% व्यक्तिले CBD प्रयोग गरेका छन्
-4०--44 बर्षका of२% व्यक्तिले CBD प्रयोग गरेका छन्
-5 45--59 वर्ष उमेरका २%% व्यक्तिले CBD प्रयोग गरेका छन्
60० बर्षको उमेरका १ 15% ले CBD प्रयोग गरेका छन्
विधि द्वारा CBD तथ्या .्क
हाम्रो एकलकेयर सर्वेक्षण अनुसार, लगभग आधा CBD प्रयोगकर्ताहरू तेल / टिन्चर, लोशन / बाम, र गम्मी रुचाउँछन्। तर त्यहाँ CBD खाद्यहरूको लागि बढ्दो बजार छ।
१%% क्याप्सूल / ट्याब्लेटमा रुचि राख्छन्
१%% सामयिक स्प्रेमा रुचि राख्छन्
१%% CBD- संचारित खानामा रुचि राख्छन्, जस्तै चकलेट
१%% वाफिंग उत्पादनहरूमा रुचि राख्छन्
१२% साबुनमा रुचि राख्छन्
११% गैर-मादक, CBD- संक्रमित पेयहरूमा रुचि राख्छन्
%% सीबीडी स्नान बम र लवणमा रुचि राख्छन्
%% स्किनकेयर उत्पादनहरूमा रुचि राख्छन्
%% प्याचमा रुचि राख्छ
१% अन्य सीबीडी उत्पादनहरूमा रुचि राख्दछन्
जब यो आउँछ कहाँ सीबीडी प्रयोगकर्ताहरूले उनीहरूका उत्पादनहरू पाउँछन्, २०१ Cons उपभोक्ता रिपोर्ट अध्ययन भन्छ:
%०% औषधालयबाट CBD खरीद गर्नुहोस्
% 34% खुद्रा स्टोरबाट CBD खरीद
एक अनलाइन रिटेलरबाट २%% खरीद CBD
अर्को स्रोतबाट १२% खरीद सीबीडी
CBD र समग्र स्वास्थ्य
CBD उत्साहीहरूले तपाईंलाई भन्दछ कि यसले उनीहरूको जीवन परिवर्तन गर्‍यो, सबै प्रकारका सकारात्मक प्रभावहरू उद्धृत गर्दै। स्केप्टिक्सले तपाईंलाई भन्दछ कि यो सबै हाइप हो र यसको कुनै वास्तविक फाइदाहरू हुँदैनन्। बीचको बीचमा सत्य झर्छ। हाम्रो सर्वेक्षणले पत्ता लगायो कि CBD प्रयोग गर्ने of२% ले यो प्रभावशाली पाएनन्। जबकि यसको प्रभावहरुमा विस्तृत अनुसन्धान भएको छैन, यसले एकको रूपमा वाचा देखाउँदछ विरोधी भड़काउने , विरोधी चिन्ता उपचार, साथ साथै एक निद्रा सहायता । र यसले हामीलाई समग्र कल्याण दिनचर्यामा नयाँ थपको रूपमा सीबीडीको अपीलमा केही अंतर्दृष्टि दिन सक्छ।
व्यक्तिहरूले सीबीडीलाई मुटुको रोग, क्यान्सर, अटोइम्यून रोग, अल्जाइमर, एक्ने, र अधिकको लागि चमत्कारपूर्ण उपचारको रूपमा लिन्छन्। अन्वेषकहरूले ठोस प्रमाणहरू फेला पारेनन कि यसले यी कुनै पनि अवस्थामा प्रभावी रूपमा उपचार गर्न सक्दछ, तर हामीलाई यो पनि थाहा छ कि सूजन र तनावले यी सर्तहरूमा योगदान पुर्‍याइरहेको हुन सक्छ। त्यसोभए, त्यहाँ दाबीहरुमा केही सत्य हुन सक्छ जुन सीबीडी दैनिक स्वास्थ्यको लागि लाभदायक छ। चाहे यो बिहानी स्मूदीमा होस्, स्किनकेयर रुटिनको अंश, वा केही अरू केही सामान्य रूपमा, नियमित सीबीडी प्रयोग सम्भवतः केही व्यक्तिहरूको लागि लाभदायक हुन सक्छ, यद्यपि यो जोखिमको साथ पनि आउँदछ।
मनोरञ्जन बनाम मेडिकल भांगको प्रयोग
मनोरंजन भांगको प्रयोग चिकित्सा प्रयोगको हिसाबले उस्तै हुँदैन। CBD तेल र अन्य उत्पादनहरू चिकित्सा प्रयोगको लागि लक्षित सामान्यतया साना खुराकमा आउँदछन् र पूर्ण-स्पेक्ट्रम CBD (वा सम्पूर्ण प्लान्ट CBD) छैनन्, जसमा THC पनि समावेश गर्दछ।
सीबीडी बिभिन्न शक्तिहरू हुन सक्दछ यदि यो एक्ोलेसनमा प्रयोग गरिएको छ वा टीएचसीसँग संयोजनमा प्रयोग गरीन्छ भने, डा। एकल भन्छन्। र केही व्यक्ति यी यौगिक प्रभावहरू चाहन्छन्। यद्यपि त्यहाँ बाहिर एक टन सीबीडी उत्पादक र खुद्रा विक्रेता छन्, र ती सबै सबै भरपर्दो छैनन्। यद्यपि हामीले सर्वेक्षण गरेका% Americans% अमेरिकीहरू सोच्छन् कि सरकारले सीबीडी नियन्त्रित गर्दछ, यो गर्दैन।
TO पेन मेडिसिन द्वारा भर्खरको अध्ययन पत्ता लगाए कि अनलाइन बेचिएको क्यानाबिडीयोल उत्पादनहरूको लगभग %०% गलत लेखिएका छन्। त्यसो भए, अनलाइन रिटेलरहरूबाट उत्पादनहरू जुन राम्रोसँग जाँचिएको छैन मा THC वा अन्य यौगिकहरूको उच्च स्तरहरू हुन सक्छ। हाम्रो सर्वेक्षणले पत्ता लगायो कि २२% व्यक्तिले CBD प्रयोग गर्दैनन् किनभने उनीहरूले उत्पाद वा निर्मातालाई विश्वास गर्दैनन्।
CBD साइड इफेक्टहरू
अन्य औषधिहरू जस्तै, CBD का पनि साइड इफेक्टहरू हुन सक्छ। मा एउटा अध्ययन , CBD प्रयोगकर्ताहरूको एक तिहाईले एक गैर गम्भीर साइड रिपोर्ट, सुक्खा मुख, उत्साह, भोक, चिडचिलो आँखा, र / वा थकान सहित रिपोर्ट गरे। र माइकल हल, एमडीका अनुसार यसका संस्थापक हल दीर्घायु क्लिनिक साइड इफेक्टको स्पेक्ट्रम अझ फराकिलो छ।
सीबीडीले बहु तेल आधारित टेर्पेन्स समावेश गर्दछ, जसले प्रतिरक्षा प्रणालीलाई उत्तेजित गर्न सक्छ, डा। हल भन्छन्। सबैभन्दा सामान्य साइड इफेक्ट सीबीडी-आधारित उत्पादनहरूसँग सम्बन्धित निद्रा, बेहोश, र सुस्ती समावेश गर्दछ; उन्नत कलेजो इन्जाइमहरू; भोक कम भयो; पखाला दाग थकान, त्रास, र कमजोरी; अनिद्रा, र केहि पर्चेको औषधीको साथ सम्भव अन्तर्क्रिया।
सामान्यतया, यी प्रभावहरू गम्भीर छैनन्, तर ती असुविधाजनक हुन सक्छन् र एक व्यक्तिको दैनिक तालिकाको लागि विघटनकारी हुन सक्छन्।
जहाँसम्म ड्रग अन्तर्क्रिया जानुहोस्, त्यहाँ अनुसन्धान र परीक्षणको एक टन छैन, त्यसैले यो भन्न गाह्रो छ। CBD ले सम्भावित हस्तक्षेप गर्न सक्दछ ट्याक्रोलिमस , एक प्रतिरोधक औषधी। किनभने त्यहाँ धेरै अज्ञातहरू छन्, कोहीले आफ्नो वर्तमान औषधिहरू CBD सँग पूरक बनाउन खोजिरहेका छन् उनीहरूले पहिले स्वास्थ्य सेवा प्रदायकसँग परामर्श लिनु पर्छ।
CBD को लागत
अमेरिकाको सीबीडी बजारको नजिक-ठाडो ट्र्याजेक्टोरी छ। धेरै राज्यहरूमा मनोरन्जन र मेडिकल मारिजुआना वैधानिकरणको साथ, बढ्दो संख्यामा भांगका फाइदाहरू हेर्दैछन्, र सीबीडी बिक्रीले त्यो चासो दर्शाउँछ।
संयुक्त राज्य अमेरिका सीबीडी बजार मूल्य २०१ 2019 मा billion अरब भन्दा बढी थियो र २०२25 सम्ममा २$ अर्ब डलर माथि जान सक्दछ। (ब्राइटफिल्ड ग्रुप, २०१))
भांग- र हेम्प-व्युत्पन्न सीबीडी बजारले २०24२24 सम्ममा%%% को कम्पाउन्ड वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) देख्न सक्छ। (बीडीएसए, २०१))
नियमित सीबीडी प्रयोगकर्ताहरूको% users% सीबीडी उत्पादनहरूमा प्रति महिना $ २०-। Spend० खर्च गर्दछ। १%% ले प्रतिमाह $ १ .० भन्दा बढी खर्च गर्छन्। (ब्राइटफिल्ड समूह, २०१))
CBD कानून र प्रतिबन्ध
यहाँ ठूलो प्रश्न छ: CBD कानूनी छ कि छैन? गाँजा वरपरका कानूनहरू प्राय: परिवर्तन हुँदैछन् र राज्यबाट राज्यमा फरक पर्दछ। हेम्पबाट व्युत्पन्न सीबीडी कानूनी हो, जबसम्म यो निश्चित आवश्यकताहरू पूरा गर्दछ। २०१ 2018 को कृषि सुधार ऐन (AKA २०१ 2018 फार्म बिल) ले संघीय विनियमन बिना हेम्प-व्युत्पन्न सीबीडी उत्पादनहरूको उत्पादन र मार्केटिंगको लागि अनुमति दिएको छ जबसम्म उनीहरूसँग ०. 0.3% THC भन्दा बढी हुँदैन। तर यी उत्पादनहरूलाई औषधीको रूपमा लेबल वा मार्केट गर्नु हुँदैन। एफडीएले केवल एक सीबीडी-आधारित ड्रग (एपीडिओलेक्स) लाई अनुमोदन गरेको छ, त्यसैले विशिष्ट मेडिकल सर्तहरूको उपचारका लागि औषधीको रूपमा अन्य सीबीडी उत्पादनहरूको बिक्री अहिलेसम्म कानुनी छैन।
थप रूपमा, एफडीएले उत्पादनहरू अनुमोदन गरेको छैन जुन क्यानाबिस वा क्यानाबिस-व्युत्पन्न यौगिकहरू मेडिकल प्रयोगको लागि समावेश गर्दछ। वास्तवमा संघीय तहमा सबै गाँजा अवैध छन् (चिकित्सा वा अन्यथा)। यसलाई अझै एक तालिका I पदार्थको रूपमा वर्गीकृत गरिएको छ (हेरोइन र LSD सँगसँगै) डीईए द्वारा अन्तर्गत नियन्त्रित पदार्थ ऐन । जे होस्, states 33 राज्यले यसलाई चिकित्सा उद्देश्यका लागि वैधानिक बनाएको छ, र ती ११ मध्ये वयस्क २१ र अधिक उमेरका लागि मनोरन्जनको प्रयोगलाई अनुमोदन गरेका छन्। प्राविधिक रूपमा संघीय कानूनले राज्यको कानूनलाई उचाल्छ, तर संघीय सरकारले कारोबार र / वा ब्याज बेच्ने वा भांग प्रयोग गर्ने व्यक्तिको मुद्दा चलाउने निर्णय गरेको छैन जहाँ यो कानूनी गरिएको छ।
मेरो रगत ग्लुकोज स्तर के हुनु पर्छ
CBD प्रश्न र उत्तरहरू
कतिजना मानिसहरूलाई CBD के हो थाहा छ?
भर्खरको Gallup सर्वेक्षणमा, adults 64% संयुक्त राज्य अमेरिकाका वयस्कहरूले भने कि तिनीहरू CBD र / वा CBD उत्पादनहरूसँग परिचित थिए। २०२० सिंगलकेयर सर्वेक्षणमा हामीले पत्ता लगायौं कि एक तिहाइ अमेरिकीले सीबीडी प्रयोग गरेका छन्।
मानिसहरूले सीबीडी किन प्रयोग गर्छन्?
व्यक्तिहरू दावी गर्छन् कि सीबीडीले एक्नेदेखि क्यान्सरसम्म सबै उपचार गर्दछ। तर सबै भन्दा सामान्य प्रयोगहरू दुखाइ, दाह, चिन्ता र अनिद्राको लागि हो।
कुन उमेर समूहले सीबीडी सबैभन्दा बढी प्रयोग गर्दछ?
भर्खरको सिंगलकेयर सर्वेक्षण अनुसार १ in--34 उमेरका जनसंख्यामा सीबीडीको प्रयोग सबैभन्दा सामान्य छ।
सीबीडीमा कति पैसा खर्च हुन्छ?
ब्राइटफिल्ड समूहले गरेको एक अध्ययनका अनुसार २०१० मा सीबीडी बजारले $ अर्ब डलर नाघ्यो, र उनीहरूले २०२25 सम्ममा उद्योग २ billion अर्ब डलर हुने आशा गरेका छन्।
कति जना मानिस CBD तेल पनी मरेका छन्?
सीबीडी तेल खपत सीधै कुनै पनि मृत्युसँग जोडिएको छैन। सबै भन्दा लोकप्रिय CBD उत्पादनहरू vape कारतूस हो, तथापि, र एफडीएले वाफिंगलाई निश्चित फोक्सोको चोटपटक र मृत्युसँग जोडेको छ ।
२०२० सीबीडी सर्वेक्षण , एकलकेयर
भांग र भांग-व्युत्पन्न उत्पादनहरूका एफडीए नियमन, क्यानाबिडिओल (सीबीडी) सहित , संयुक्त राज्य खाद्य र औषधि प्रशासन
Cannabidiol बुझ्दै , ब्राइटफिल्ड समूह
चिकित्सा भांग प्रभावकारिता मा प्रमाण , D.C स्वास्थ्य विभाग
Cannabidiol (CBD) - हामीलाई के थाहा छ र हामी के गर्दैनौं , हार्वर्ड
CBD मुख्यधारमा जान्छ , उपभोक्ता रिपोर्टहरू
अमेरिकी सीबीडी बजार २०२24 सम्ममा २० अर्ब डलरको बिक्रीमा पुग्ने अनुमान छ , BSDA
संयुक्त राज्य अमेरिका मा cannabidiol (CBD) को लागी इन्टरनेट खोज को प्रवृत्ति , अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशनको जर्नल
चिन्ता र निद्रामा Cannabidiol: एक ठूलो केस श्रृंखला , Permanente जर्नल
क्यानाबिडियोल प्रयोगकर्ताहरूको क्रस-अनुभागीय अध्ययन , क्यानाबिस र क्यानाबिनोइड अनुसन्धान
अमेरिकाको हेम्प एकर ट्रिपल भन्दा बढि , Food Business News
ट्रान्सडर्मल क्यानाबिडिओलले जोर्नीशोथको मुसा मोडलमा सूजन र पीडासँग सम्बन्धित ब्यवहार कम गर्दछ , युरोपेली जर्नल अफ पेन
Zyrtec vs. Benadryl: भिन्नता, समानताहरू, र जुन तपाईंको लागि राम्रो छ
लाटुडा बनाम अबिलिफाई: भिन्नता, समानताहरू, र जुन तपाईंको लागि उत्तम छ
के तपाइँ बीटा ब्लकरहरू र व्यायाम लिन सक्नुहुन्छ?
यी foods फूडहरू प्रयोग गर्नुहोस् जसले गठियालाई सहयोग गर्दछ। र केबाट बच्न सिक्नुहोस्
Pruuent vs Repatha: मुख्य भिन्नता र समानताहरू
विनाशकारी स्वास्थ्य बीमा के हो?
नयाँ सिंगलकेयर राष्ट्रिय विज्ञापन अभियानमा मार्टिन शीन ताराहरु लाखौं लाई देखाउन कसरी प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्समा पैसा बचत गर्ने
यो आमाको दिन, आमालाई चेकअप अनुसूची गर्न प्रोत्साहित गर्नुहोस्
हाइड्रोकोडोन बनाम ऑक्सीकोडोन: भिन्नता, समानताहरू, र जुन तपाईंको लागि उत्तम छ
चेरी एंजियोमा के हो?
म बीमा बिना कहाँ निःशुल्क फ्लू शट प्राप्त गर्न सक्दछु?
बिमा बिना कसरी अस्पताल बिलहरू तिर्ने
कत्ति आईबुप्रोफेन मैले कम्मरमा दुखाइ लिन सक्छु?
जुन अधिक प्रभावी सियालिस वा वायग्रा हो
benadryl सेवन गरेपछि कति लामो तपाईं रक्सी पिउन सक्नुहुन्छ
कसरी बाट यूटी पीडाबाट छुटकारा पाउन सकिन्छ